Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Kaniisadda Adduunka ee Ilaah (WKG Switzerland) waxay u qaadataa dhawritaanka macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed mid aad u culus. Waxaan ula dhaqmaynaa macluumaadkaaga qaaska si qarsoodi ah oo waafaqsan qaanuunka ilaalinta sharciga ee qaanuunkan iyo bayaanka ilaalinta xogta. Adigoo adeegsanaya websaydhka, waxaad ogolaanaysaa aruurinta, socodsiinta iyo adeegsiga xogta sida lagu sharaxay hoosta. Websaydhkeenna wuxuu ku shaqeeyaa xarun xogta Switzerland ah.
Websaydhkeenna badanaa waa la istcimaali karaa iyadoo aan la bixin xog shakhsiyeed. Ka-reebitaanku waa aagag iyo adeegyo si dabiici ah ugu baahan xog-shaqsiyeed (tusaale. amarada). Macluumaadka noocaas ah waxaa loo isticmaali doonaa oo loo kaydinayaa ujeeddooyinka uu caddeeyey hawl-wadeenka ama natiijada ka soo baxda mareegtada oo looma gudbin doono dhinacyada saddexaad oggolaanshahaaga la'aantiis.
Waxaan ku tilmaameynaa gudbinta xogta internetka (tusaale ahaan markii aad kula xiriireyso emaylka) waxaa laga yaabaa inay hesho nusqaanno amni. Suurtagal ma aha in gebi ahaanba laga ilaaliyo macluumaadka marinka saddexaad.
Websaydhkan wuxuu isticmaalaa waxa loogu yeero cookies. Kuwani waxay u adeegaan si ay uga dhigaan adeeggeenna mid saaxibtinimo leh, wax-ku-ool ah oo badbaado leh. Kukiyada waa faylal qoraal oo yar oo kombiyuutarkaaga lagu keydinayo oo uu dhigayo biraawsarkaaga.
Inta badan cookies aan isticmaalno waxay shaqeynayaan sanado badan waxaana lagu keydin doonaa aaladdaada illaa aad ka tirtirto. Kukiyadaani waxay noo suurta galinayaan, tusaale ahaan, inaanu aqoonsano meelahii aad sameysay sidaas darteedna aan kordhino saaxiibtinimada isticmaale.
Waad dejin kartaa biraawsarkaaga si laguugu wargeliyo dejinta cookies-ka oo u oggolow oo keliya kiimikada kiisaska shaqsiga ah, ka saarista aqbalaada kiiska kiisaska qaarkood ama guud ahaanba, oo aad dhaqaajiso tirtirka otomatiga ah ee cookies marka biraawsarku xirmayo. Haddii cookies-ka la baabi'iyo, waxqabadka shabakadan waa la xaddidi karaa.
Faylasha diiwaanka server
Bixiye websaydhkan si otomaatig ah ayuu u ururiyaa una kaydiyaa macluumaadka ku jira faylasha loo yaqaan 'log log files', kaas oo biraawsarkaagu si toos ah noogu gudbiyo. Kuwani waa:
ciwaanka IP: ga
Taariikh / waqti
loo yaqaan bogga
Xogtan ayaa si otomaatig ah looga tirtiraa websaydhka hal toddobaad kadib. Waxaan xaq u leenahay inaan si gaar ah u eegno xogtan haddii aan ka warhayno tilmaamo gaar ah oo ku saabsan isticmaalka sharci-darrada ah.
Matomo (Falanqaynta Range)
Xogta soo socota ayaa la soo aruuriyay laguna kaydiyaa qaab dhismeedka Matomo:
cinwaanka IP-ga ee kombiyuutarka codsanaya (qarsoon kahor intaanad keydin)
Taariikhda iyo waqtiga gelitaanka
websaydhka marin-ka-helista laga sameeyay (URL tixraac)
magaca iyo URL faylka dib loo helay
biraawsarka loo adeegsaday (Nooca, nooca iyo luuqadda),
nidaamka qalliinka kombiyuutarka
Wadanka uu ka soo jeedo
Matomo waxay isticmaashaa cookies ka keydsan kombuyuutarka isticmaaleha kaasoo u suurtageliya falanqaynta isticmaalka dalabkeena tooska ah ee isticmaalaha. Bogagga isticmaale ee qarsoon ayaa laga abuuri karaa xogta la sameeyay. Kukiyada ayaa leh muddo kayd ah hal toddobaad. Macluumaadka uu soo saaray cookie ku saabsan adeegsiga websaydhkan waxaa kaliya lagu keydiyaa adeegayaga oo looma gudbiyo dhinacyada saddexaad.
Isticmaalayaashu way diidi karaan ururinta macluumaadka qarsoon ee barnaamijka Matomo wakhti kasta oo leh saameyn mustaqbalka.
Boggani wuxuu isticmaalaa qaababka loo yaqaan "web pages", oo ay bixiso Google, oo loogu talagalay matalaadda midabada ee xarfaha. Markaad soo wacdo bog, shabakaddaadu waxay ku dhejisaa qoraalada shabakada loo baahan yahay si aad uhesho cachekaaga si aad u muujiso qoraallada iyo xarfaha si sax ah.
Si arrintan loo sameeyo, browserka aad isticmaashid waa inuu isku xiraa serverka Google. Natiijo ahaan, Google wuxuu bartaa in boggayaga internetka laga helayo cinwaankaaga IP. Isticmaalka Shabakadda Websaytka Google waxay ku jirtaa xiisaha ah soo bandhigid joogta ah oo soo jiidasho leh ee adeegyadayada internetka. Tani waxay ka dhigeysaa daneyn sharci ah oo macnaheedu yahay macnaha Art. 6 para. 1 lit. DSGVO.
Haddii bakhtiyirahaaagu uusan taageerin xarfaha internetka, font-ka default ayaa loo isticmaali doonaa kombiyuutarkaaga.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Google Web Fonts, fiiri https://developers.google.com/fonts/faq iyo siyaasadda gaarka ah ee Google: https://www.google.com/policies/privacy
Goobtani waxay u isticmaashaa sirta SSL sababaha nabadgeliyada iyo inay ilaaliso gudbinta waxyaabaha qarsoon, sida weydiimaha aad noogu soo dirto hawlwadeenka goobta. Waad ku aqoonsan kartaa xiriir qarsoodi ah xaqiiqda ah in khadka cinwaanka biraawsarku uu isku beddelo «http: //» oo uu noqdo «https: //» iyo astaamaha qufulka ee khadka biraawsarkaaga. Haddii SSL encryption la hawl geliyo, macluumaadka aad noogu soo gudbiso ma aqrin karaan dhinac saddexaad.
Adeegsiga raadinta websaydhka
Bartayada ayaa adeegsata «howlaha shabakadda ee Google». Bixiyuhu waa Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Shuruudaha la baadhay waxaa loo diraa xog uruurinta iyada oo loo marayo foom si natiijooyinka suurtagalka ah loo soo saaro. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan tirakoobyo raadin oo ku yaal bogga (yaa raadiyay goorta).
Waad ka hortegi kartaa kaydinta buskudka adigoo dejinaya barnaamijka biraawsarkaaga si ku habboon. Si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahayn inaan tilmaano in kiiskan ay dhici karto inaadan u wada adeegsan karin dhammaan howlaha degelkan illaa xadkooda. Intaa waxaa u dheer, waad soo aruurin kartaa xogta uu soo saaray cookie-ku oo la xiriira isticmaalka boggaaga (oo ay kujirto cinwaankaaga IP) ee Google iyo ka shaqeynta xogtan Google adoo soo dejinaya isla markaana ku rakibaya galinta biraawsarka ku jira isku xirka soo socda: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Isku-darka adeegyada iyo waxyaabaha ka kooban qaybaha saddexaad
Waxaan u isticmaalnaa dalabkeena tooska ah ee ku saleysan danahayaga sharciga ah (tusaale xiisaha loo leeyahay falanqaynta, kobcinta iyo hawlgallada dhaqaale ee dalabkeena khadka tooska ah iyadoo la adeegsanayo macnaha Art. 6 Para. 1 lit. GDPR) waxyaabaha la soo bandhigo ama adeegga waxaa laga helaa bixiyeyaasha dhinac saddexaad si loogu daro waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo adeegyadooda, sida fiidiyowyada ama foornooyinka. (halkan waxaa lagu magacaabaa "waxa ku jira"). Tani had iyo jeer waxay soo saartaa in adeeg bixiyayaasha qaybta saddexaad ee ka kooban sheygan ay u muuqdaan cinwaanka IP-ga ee adeegsadaha, maadaama cinwaanka IP-ga aysan u soo diri karin nuxurka biraawsarkooda. Cinwaanka IP ayaa sidaas darteed loo baahan yahay si loo muujiyo waxa ku jira. Waxaan ku dadaaleynaa inaan isticmaalno kaliya waxyaabaha ay bixiyeyaashooda adeegsadaan oo keliya cinwaanka IP si loogu gudbiyo waxa ku jira. Bixiyeyaasha qaybta saddexaad waxay sidoo kale isticmaali karaan waxa loogu yeero calaamadaha pixel (sawiro aan muuqan, oo sidoo kale loo yaqaan "beakoni websaydh") oo loogu talagalay ujeedooyinka tirakoobka ama suuqgeynta. Calaamadda "pixel tags" waxaa loo isticmaali karaa in lagu qiimeeyo macluumaadka sida taraafikada booqdayaasha bogagga shabakadan. Macluumaadka been-abuurka ah ayaa sidoo kale lagu keydin karaa cookies-ka aaladda isticmaalaha waxaana ku jira waxyaabo ay ka mid yihiin, macluumaad farsamo oo ku saabsan biraawsarka iyo nidaamka qalliinka, tixraaca websaydhyada, waqtiga booqashada iyo macluumaad kale oo ku saabsan adeegsiga dalabkeena internetka, iyo sidoo kale in lagu xiriiriyo macluumaadka noocaas ah ilo kale.
Waxaan qaadnaa talaabooyin farsamo oo ku habboon sida waafaqsan Art 32. iyo tillaabooyin abaabul si loo hubiyo heer ilaalin oo ku habboon halista; Tallaabooyinka waxaa ka mid ah, gaar ahaan, hubinta sirta, sharafta iyo helitaanka xogta iyadoo la xakameynayo marinka jirka ee xogta, iyo sidoo kale marin u helka, gelinta, wareejinta, sugida jiritaanka iyo kala soociddiisa. Intaa waxaa sii dheer, waxaan diyaarinay habraacyo dammaanad qaadaya adeegsiga xuquuqda mawduuca macluumaadka, tirtirka macluumaadka iyo jawaab-celinta hanjabaadaha xogta. Waxaan sidoo kale tixgalineynaa ilaalinta macluumaadka shakhsi ahaaneed marka la tixraacayo markaan dooranayno ama xulaneyno qalabka, softiweerka iyo howlaha, iyadoo la raacayo mabda'a ilaalinta xogta iyada oo loo marayo qaabeynta tikniyoolajiyada iyo dejinta ilaalinta asxaabta-asalka ah. (Art. 25 GDPR).
Isbedelada siyaasadaha qaaska ah
Waxaan xaq u leenahay inaan mararka qaar wax ka bedelno caddaynta ilaalinta xogta si ay had iyo jeer u dhigmato shuruudaha sharciga ah ee hadda jira ama aan hirgalinno isbeddelada ku saabsan adeegyadeena ee bayaanka ilaalinta xogta, tusaale ahaan. T. Marka la soo bandhigayo adeegyo cusub. Bayaanka cusub ee ilaalinta xogta ayaa markaa lagu dabaqi doonaa booqashadaada soo socota.
Aaminaadaadu waa mid muhiim noo ah. Waxaan markaa jeclaan lahayn inaan ka jawaabno su'aalahaaga waqti kasta. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan caddeynta ilaalinta macluumaadkaan kama jawaabi karto ama haddii aad jeceshahay macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qodob kasta, fadlan nala soo xiriir wakhti kasta.
Isha laga soo xigtay: Qaybo ka mid ah bayaanka ilaalinta macluumaadkaan waxay ka yimaadeen e-recht24.de
Kaniisadda Ilaahay ee Caalamka (Switzerland)